Daandii Ragabaa: Qarmammee Adoolessa 2015
Miseensota Waldaa Hawaasa Oromoo Australia kutaa Victoria walgahii Adoolessa 25 bara 2015 taaán irratti ummanni Oromoo qabeenyaa saamamaa, q’eesaarraa buqqa’ee dhiitamaafi ajjeeffamaa wayita jiru kanatti, maqaa diyaaspooraatiin biyyatti galanii dachii uummatichaa fudhatanii akeeka gabroomfataarratti hundaa’uun, yeroo gabrummaa dheeressuu akka ta’e dubbatame.
Daandii Ragabaa: Qarmammee Waxabajjii 2015
“Kaayyoon qabsoo Bilisummaa Oromoo abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuu dha,” jedha Hayyudureen Ittaanaa ABO, Ob Bultum Biyyoo.
Ob Bultim Biyyoo Gaaffii fi Deebii Oromedia waliin godhe keessatti akkamiin qabsoo Oromoo keessatti qooda fudhachuu akka eegalee fi muuxannoo dheeraa qabsoo keessatti horate bal’inaan ibsee jira.
Daandii Ragabaa: Qarmammee Ebla 2015
Qarmammee Eblaa keessatti miseensota ABO sadii qabadhee dhiyaadheera. Sadan isaanii gaaffii dhimma qabsoo fi galii qabsoo Oromoo irratti isaaniif dhiyaateef deebii kennan qaban.
Isin hoo maal jettu? Daaw’adhaatii, bakka jirtanitti waliin maryadhaa; akeekaa fi galii qabsoo Oromoo irratti hubannoo ifaa fi qulqulluu qabaadha! Yaada keessanillee itti eda’aa; Daaw’annaa Gaarii!
Daandii Ragabaa: Qarmammee Bitootessa 2015
Qarmammee Bitootessa 2015 keessatti miseensota hawaasa Oromoo Melbourne jiraatan marii taasifame qabadhee dhiyaadheera. Mariin kun dhimma Oromoo guddaa fi fardii irratti akn xiyyeefatee dha. Oromoon maal gochuu qaba? Haalli amma deemaa jiru hoo maal fakkaata? Maal yoo goone maal furuu dandeenya? Gaaffiileen hedduu dha; deebiin garuu muraasa.
Isin hoo maal jettu? Daaw’adhaatii, bakka jirtanitti waliin maryadhaa; akeekaa fi galii qabsoo Oromoo irratti hubannoo ifaa fi qulqulluu qabaadha! Yaada keessanillee itti eda’aa;
Daandii Ragabaa: August 2014
Do you want to raise awareness about Oromo for free? Here is your chance! Bring along your family and friend to human rights for Oromia Concert.